प्रविधि र आविष्कार संगै Robotics, Programming शिक्षाको महत्व — नयाँ कुरा
Robotics भनेको के हो ?
Robotics एक अन्तःविषय क्षेत्र हो जुन कम्प्युटर विज्ञान र ईन्जिनियरिलाई समाहित गर्दछ। रोबोटिक्स डिजाइन, निर्माण, अपरेशन, र रोबोट को उपयोग शामेल छ। Robotics को लक्ष्य भनेको मेशिनहरू डिजाइन गर्नु हो जुन मानवलाई मद्दत र सहयोग गर्दछ ।
Programming अथवा Coding भनेको के हो ?
कम्प्युटर Programming or Coding भनेको एक विशिष्ट कम्प्युटि result परिणाम पूरा गर्न वा विशेष कार्य गर्नको लागि कार्यान्वयन योग्य कम्प्युटर Program डिजाईन र निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो।
अहिले को युगमा प्रविधि बिना को जीवन सोच्न सकिदैन, आजको दिन सम्म संसारले कोल्टे फेरी सक्यो अब पालो तपाई हामीको हो । मानव एक विद्वान प्राणी हो जसको सोच्ने क्षमता संगै उसले विभिन्न आविष्कार गर्नुको साथै जीवनलाई निकै सरल बनाएको छ ।
पक्कै पनि भोलिको दिन को कल्पना गर्ने हो भने रोबोटिक्स जस्ता अन्य प्रविधिको क्षेत्र निकै नै राम्रो देखिन्छ ।
विभिन्न देशले आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रमा निकै परिवर्तन ल्याएको छ । जसले गर्दा उनीहरुको बालबालिका यी क्षेत्र हरुमा सुरुदेखि नै निकै सक्रिय देखिएको पाइन्छ अब पालो हाम्रो देशको ।
अब यस शिक्षा अन्तर्गत विद्यार्थीले के के सिक्न पाउछन् त ?
App Inventor & Developing
Basic Embedding System
IOT Pro Engineer
२१औ सताब्दी Robotics, Coding, Programming जस्ता क्रियाकलाप निकै फस्टाएको देख्दा हामीले नेपाली विद्यार्थीमा पनि यस शिक्षालाई प्रदान गर्न सकियो भने उनीहरुको भबिस्य सुनौलो हुनुको साथै राम्रो तलब पाउन सक्छन |
विश्वमा हरेक दिन हरेक पल सम्पुर्ण कार्यहरु Digital हुनुको साथै नया आविष्कारहरु पनि गरेको छ । १० बर्ष पछि सम्पूर्ण विश्व Digitalization हुनेछ र धेरै जसो काम Robots द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ। यस कारण अबको १० वर्ष पछी नेपाली मार्केटमा पनि यस्ता Robotics, Programming, Coding Skills भएको मानिस को निकै माग बढ्नेछ जसकारण तपाइको आकर्षित तलब हुनुको साथै भबिस्य पनि सुरक्षित हुनेछ । आजका सबै विकासोन्मुख देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप, चीन, कोरिया लगायत भारत सरकारले यस वर्ष Robotics, Programming, Coding अनिवार्य पाठ्यक्रमहरू थप गरेको छ जुन यस वर्ष Class ६ बाट पढिएको छ। अब नेपाल सरकारले पनि यो कोर्स थप गर्ने योजना बनाएको छ।
थप तपाइलाई एस बारेमा केहि बुज्न परेमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् ।
फोन न: 9801236141, 9851044952
ठेगाना : Near Swayambhu Banquet, Dallu-15,Kathmandu,Nepal